चीन धैरै कुरा हो तर ”प्यारो छैन” « रिपोर्टर्स नेपाल
अभिजित भट्टाचार्य: बेइजिङका ‘शाही शासक’ सी जिनपिङको अनुहारले ताजा, अनुकूल छविलाई “प्यारो“ र “नम्र“ मध्यकालीन राज्यको सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ । यसले मलाई लोकप्रिय बंगालीको एउटा सम्झना दिलाउँछः “भूत मुखे राम नाम“ । (यो कुनै अनुवाद होईन, “शैतानले उद्धृत गर्ने शास्त्र हो)
हिन्दू विश्वासको आधारमा एक मूर्ख मानिसले भगवान राम सम्झना गर्नु अशुभ आत्माको असम्भवताको, पवित्रतामा अन्तिम र मूल देवत्व देखाउँछ । र, संसारको सम्बन्धमा र जन गणतन्त्रको सन्दर्भमा – सम्पूर्ण दृश्यलाई प्रहसनको क्षेत्रमा पुर्याउँछ । यो कहिले पनि हुन नसक्ने विषय हो !
बेइजिङ र यसको १.४ अरबभन्दा बढी जनसंख्याको ‘सम्राट’ सी र चीनको ‘निर्दयी र हार्दिक’ कम्युनिष्ट पार्टीको जुलाई १ मा शताब्दी मनाउने “प्रेम र नम्रता“ को छवि पछि मायावी सावित हुनेछ । २०१२ देखि उनको देशको सर्वोपरि नेता भएको सी (पहिले सीपीसी महासचिवको रूपमा, त्यसपछि राष्ट्रपतिको रूपमा उजागर भए । भारतले चीनका सबै छिमेकीहरू लगायत सम्पूर्ण विश्वको विरूद्ध रोक्न सकिने नीति अनुसरण गरेको छ । तर, उनीहरूले उक्त विषयको बारेमा केही पनि भनेका छैनन् । यो तथाकथित “मुटुको परिवर्तन“ एक रणनीतिक शैली मात्र हो । ‘दुई कदम अगाडी, एक कदम पछाडि’ नीतिलाई परम्परागत चिनियाँ धोखाधडी अनुसार सीले आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
सीको नीति भने मूर्खतापूर्ण हुनेछ । यसको साटो, हामीले सीपीसीको नयाँ रणनीति पछाडि के छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । के चीनका कूटनीतिज्ञहरू र सिपाहीहरूले अभ्यास गरेका “ब्वाँसो योद्धा” को रणनीति काम गर्न सक्छ ? के यसले नयाँ सकारात्मक धारको शुरुवात सक्छन् ? यो सम्भव छैन ।
ग्यालरीमा खेल्दा र “प्यारा“ र “नम्र“ जस्ता केही मोहक भाषाले योद्धालाई प्रेम, सद्गुण, धार्मिकता, ईश्वरीय र दयाको प्रेषितमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । विनाश पछि शान्ति, सद्भाव र विश्वव्यापी भनतृत्व आउँछ । के सीले आफ्ना कूटनीतिक “ब्वाँसोहरू“ बाट विश्वभर बौद्ध धर्म, शान्तिको धर्म फैलाउन सक्छन् ? उनीहरू भन्छन्, “प्रेम घरैबाट सुरु हुन्छ“, र बेइजिङका मालिकले आफ्नो प्रेम र एकताको नयाँ मन्त्रको साथ ताइवान र हङकङलाई समेट्न सक्छन् ? के हामी लद्याख हिमालयमा पहिला प्रभाव देख्न सक्छौं ? के गैर–चिनियाँ जहाजहरूले साउथ चाइना सी पार गरी आफ्नो यात्राको अधिकार प्रयोग गर्दा “प्रिय“ चीन वास्तविक हो भनेर जान्न सक्छन् ?
चीनको मनसाय र मन्त्रहरू वुहान–मूल भाइरसको कारण उजागर गरियो जसले पृथ्वीको जनसंख्यालाई तहसनहस पारेको छ । यी सबैमा, यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरुका लागि चीन “एकमात्र सभ्यता“ हो र बाँकी विश्व निम्न “बर्बरहरू“ हुन् जो कि निकृष्ट छन् । चिनियाँ जनसेनाले जहिले पनि भूमि, समुद्री र साइबरस्पेसमा विस्तार गर्ने खोजेको छ । जसलाई कुनै पनि हिसाबले धम्की दिन मिल्दैन । उनीहरूलाई नगदको साथ जित्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । यसको उद्देश्य विदेशमा भएका हरेक सम्भावित रणनीतिक सम्पत्ति किन्ने हो । विदेशी प्राविधिक कम्पनीहरूको शत्रुतापूर्ण सहाराको सहारा लिएर विदेशी राजनीतिज्ञलाई नगद वा दयालु प्रलोभनमा पार्ने र मिडियालाई कुनै पनि माध्यमबाट हेरफेर गरेर चिनियाँहरूको छविलाई राम्रो बनाउने मात्र हो ।
सन् १८३८–१९४२ सम्म भएको अफगानिस्तान–अफिम युद्ध र सन् १९९७ सम्मका लागि हङकङलाई लन्डनले अवलम्बन गरेको आधारमा सीपीसीको ध्यान बेलायतमा केन्द्रित भएको थियो । बेलायतको मुख्य रणनीतिक सम्पत्ति हासिल गर्ने सीपीसी मुख्य लक्ष्य हो । सन् २०२१ मे देखि बेलायतमा चीनले आफ्नो पकड बनाइरहेको दखिन्छ । चीनका लगानीकर्ताहरुले बेलायतका व्यवसाय, पूर्वाधार, सम्पत्ति र अन्य सम्पत्तिहरु लगायतमा आफ्नो १३५ अर्ब पाउन्डको लगानी गरेको कारण चीनले कसरी बेलायतलाई खरिद गर्न सक्षम भएको दर्शाउँछ । चीनले योसम्म गर्यो कि बेलायतमा किन्नै नसक्ने राज्यहरुको स्वामित्वलाई खरिद गरेर देखायो । यसमा चीनका ८० देखि २०० लगानीकर्ताहरु समावेश छन् । यी सबमा लगानी गर्नेहरु पिएलए र सीपीसीका लिंकमा रहेका खुलेको छ । त्यसपश्चात चीन र बेलायतको सम्बन्ध तनावग्रस्त हुन थालेको थियो । यी सामान्य विषय थिएन यसमा बलायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार जस्तै थेम्स वाटर, युके पावर नेटवर्क, हिथ्रो एयरपार्टहरु समावेश थिए । चीनले आफ्नो लगानीको फैलावटलाई निरन्तर उचाइ दिँदै गयो । यसमा निजी विद्यालय र बेलायतका महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरुसमेत थियो । “बेलायतको कमजोर नियमले चीनलाई बेलायती आणविक ऊर्जा, तेल, इस्पात, पानी र यातायातमा उल्लेखनीय लिनको लागि अनुमति दियो ।” पूर्वी एसियाली चीनले हाम्रो इतिहासका पुस्ताहरुको पुरानो ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ सित बदला लिइरहेको थियो ।
सीपीसीले लन्डनलाई आर्थिक/व्यापारिक आक्रमण गरिरहेको स्पष्ट चेतावनी थियो । “चिनियाँहरु आउँदैछन्“ अब नारा होइन, वास्तवमा के हो “चिनियाँ सबै कुनामा पुगेका छन् ।’’ विश्वका सबै राष्ट्रहरूले खतराका संकेतहरू ध्यान दिएर हेर्नुपर्दछ किनकि खतरा वास्तविक छ । र, धेरै राष्ट्रहर ब्यूँझन थालेका छन् र आफूलाई “चाइना भाइरस“ बाट बचाउनको लागि कदम चाल्न शुरू गरेका छन् । स्वास्थ्यदेखि जलविज्ञान, वाणिज्य, उद्योग, टेक्नोलोजी, र अन्य धेरैमा चीनको पकड स्पष्ट छ । “समग्र युद्ध“ सुरु भएको छ र यो सीपीसीले कल्पना गरेको तरिका होइन । बेल्ट र रोड पहल विदेशीहरूको लागी यति आकर्षक देखिँदैन । तर, ‘बेइजिङका सम्राट’ सीको महान योजनाहरू खतरा बनिरहेको छ र उनले चीनलाई एक “प्यारो“ राष्ट्र बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् ।
अभिजित भट्टाचार्यको यो विचार एशिया एजबाट अनुवाद गरिएको हो । उनी चाइना इन इन्डिया पुस्तकका लेखक हुन्